मन्त्रि बन्न नपाएपछि मेटमणिले माधब नेपाललाई लगाए ग'म्भी'र आरोप, राजनीतिमा तरङ्ग !
मन्त्रि बन्न नपाएपछि मेटमणिले माधब नेपाललाई लगाए ग’म्भी’र आरोप, राजनीतिमा तरङ्ग !
काठमाण्डौँ । मन्त्री बन्ने व्यापक चर्चाका विच मन्त्री बन्न नपाएका नेकपा एसका नेता मेटमणी चोधरीले आफु मन्त्री किन बन्न सकिन भन्ने बिषयमा मुख खोलका छन् ।
नेता चौधरीले एक टेलिभिजन अन्तवार्ताका क्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मोटो रकम बुझाउँन नसक्दा मन्त्री बन्न नपाएको घुमाउँरो स्विकारोक्ती गरेका छन् ।गहँभरि आँशु पार्दै चौधरीले आफ्नो मनको बह पोखेका छन् ।
नेकपा एसका नेता माधव कुमार नेपालसँग निकै चित्त दुखाएका चौधरीले मन्त्री बनेकाहरु ‘कि त म भन्दा सिनियर हुन पर्यो कित मेरो भन्दा ठूलो क्षमता हुनु पर्यो त्यो त दुवै छैन अनी उनीहरु कसरी मन्त्री बने म किन बनिन भन्ने त प्रष्ट भयो नी’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्री बन्न कसरी प्रभाव पार्नु पर्छ भन्ने कुरा आफुले नजानेकोले मन्त्री बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रभाव पार्न जान्नेहरु मन्त्री भएको उनले बताए । आफु एकोहोरो पार्टी बनाउँन मात्रै लागेको र कुनै लपनपछनमा नलागेका कारण मन्त्री बन्न नपाएको गुनासो उनले गरे ।
मन्त्री बन्न नपाए पनि अविचलित रुपमा आफु पार्टी काममा लागीरहने पनि उनले बताए । यस अघि पनि राजनितीमा ठूलो उताडचढाव बेहोर्दै आएको भन्दै फेरी पनि अडिग भएर पार्टी काममा लाग्ने उनले बताए । मन्त्री नबने पछि निर्वाचन क्षेत्रबाट फोन गरेर मतदाताहरु रोइरहेको पनि उनले सनुाए ।
‘आफ्ना मतदाताहरुमा मेटमणी चौधरी पक्कै मन्त्री बन्छ भन्ने लागेको थियो तर लिष्ट बाट हट्दा निकै दुख मान्न भएको छ । पर्यटन मन्त्रीनै बन्छ भन्ने थियो पर्यटन नबने पनि अरुनै मन्त्री बन्छ दाङको विकास हुन्छ लुम्बीनी प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने ठानेका मतदाताहरुको मनमा ठेस पुगको छ उनले भनेका छन् ।’ @Otvnepal